65 Qof Ayaa Ku Dhintay Dagaal ka Maanta Ka Dhacay Muqdisho
Dadweynaha Waqooyiga Muqdsiho oo dib uxasuustay maanta dagalkii 4ta Bilood ee Caydiid Iyo Cali Mahdi
Waxaa maanta ka dhacay Waqooyiga Muqdisho sida Kaaraan meelo ka mida, Cabdicasiis iyo shibis dagaal khasaarihiisu gaarayo inta la ogyahay dhimasho 65 qof iyo dhaawaca aan ka yarayn tiradaas. Dagaalkaas lagu hoobtay oo udhexeeye beelaha ay ka soo kala jeedaan hoggaamiyaha GBQS Muuse Suudi Yalaxow iyo Ganacsade Bashiir Raage. Waxaana ku baro kacay dad aad utiro badan si ay uga badbaadaan xabadaha iska wiifaya ee la isku ridayo .
Oday ruug cadaaya oo waligiis ku noolaa Agaagaarka Kaysaney ayaa yiri dagaalka maanta dhacay waxuu la mid yahay kii loo yaqaanay 4ta bilood ee dhexmaray Caydiid iyo Cali Mahdi.waayo buu yiri waagaasaa iigu dambaysay dad loo aasayo raxanraxan Maanta ka horow.guuxa hubka laisku ridayo oo u-saan-saan dhow kii waagaas ayuu yiri odaygaas oo ii sheegay inuu naf soo biday gabar uu dhalay oo lagu qabo Xaafadda Xamarjadiid.
Dagaalka maanta dhacay waxuu biloday in ka yar 24 saac ka dib markii beesha wacbuudhan ku hanjabtay inayan beel kaliya awoodeeda yeelanayn dhaqaalaha kasoo baxa Dekadaha Ceelmacaan iyo Cisalay oo waa siday hadalka uyiraahdeene u dhexeeyaan beelwaynta Muddulood.
Maamulka Puntland oo Markii u horaysay Gaaray Magaalada Ceerigaabo
Wararka naga soo gaaraya Magaalada madaxda Gobalka Sanaag ee ceerigaabo ayaa waxay sheegayaan in wafti ka yimmid Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ay yimaadeen magaalada Cerigaabo oo sida laga warqabo ay gacanta ku hayso Dowladda Somaaliland.Waftiga oo u hogaaminayo Guddoomiye ku xigeenka gobalkaas ay u magacowday Puntland laguna magacaabo Axmed Muuse Guulled ayaa waxaa kaloo ka mida wafitga guddoomiyaha Degmada Laasqoray .ayagoo ku tilmaamay safarkooda sidii ay usoo ogaan lahaayeen xaaladda dadka taageersan Maamulka Puntland ee ku sugan Magaalada Cerigaabo,waxayna wararku sheegayaan in dadwaynaha magaaldu ka cabsi qabaan inay abuurto xiisad cusub oo ka dhex aloosanta labada maamul ee Somaaliland iyo Puntland.
Waa markii u horaysay oo masuuliyiin ka socota Maamulka Puntland ay yimaadaan Magaalada madaxda Gobalka Sanaag ee cerigaabo,ayagoo ku ekaa waa maamulka Puntlande dhanka Beriga Sanaag.waxaan ilaa iyo hadda wax wara ka oran imaatinka reer Puntland, masuuliyiinta Somaliland.